वामदेववि´रुद्धको मु´द्दा हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडौं, १४ असोज । राष्ट्रियसभाका म´नोनित सांसद बामदेव गौतमवि´रुद्ध परेको मु´द्दामा ब´हस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बाँकी का´नुन व्यवसायीले बह´स गरेपछि मु´द्दाको अन्तिम कि´नारा लगाइनसक्छ ।
आज रिट दर्ता गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अलावा बद्रिबहादुर कार्की, हरि उप्रेती, रुद्र शर्मा लगायतले. ब´हस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अ´ग्नि खरेल र घनश्याम भट्टराईले ब´हस गरेका थिए । बामदेव गौतमको प´क्षका का´नुन व्यवसायीले ब´हस गर्न बाँकी रहेकाले अन्तिम किनारा लाग्न अझै केही समय लाग्न सक्छ । अर्को पेशी यही शुक्रबार तो´किएको छ ।
यसअघि आजै बामदेववि´रुद्धको मु´द्दामा सं´वैधानिक इजलाश गठन गरिएको थियो । यो मु´द्दाको सं´वैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा छन् ।
५ असोजमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने नि´र्णय खा´रेज गर्नु र मन्त्री बन्न नदिनु भनी दा´यर गरेको मु´द्दामाथि न्यायाधीश डा. आ´नन्दमोहन भट्टराईको ए´कल इ´जलाशले अन्तरिम आ´देश जा´री गर्दा नै राष्ट्रियसभाका म´नोनित सांसद बामदेव गौतमलाई कुनैपनि स´वैधानिक जिम्मेदारी दिने कार्य नगर्न भनेको थियो । बामदेवमाथिको मु´द्दाको सं´वैधानिक इजलाशबाट अ´न्तिम कि´नारा लगाउन १४ असोजका लागि सु´नुवाई तो´केको थियो ।
यसअघि ७ असोजमा न्यायाधीश आ´नन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले जारी गरेको आ´देशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गा´म्भीर्य एवम् सं´वैधानिक महत्वलाई दृ´ष्टिगत गर्दै प्र´स्तुत वि´वादमा अन्तरिम आ´देश जा´री हुने वा नहुने विषयको टु´ङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिंदा वि´पक्षीको ह´कमा थप सं´वैधानिक जि´म्मे´दारी दिने लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अ´दालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ २ (ख) ब´मोजिम वि´पक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आ´देश जा´री गरिएको छ ।’
नेपालको संविधानको धा´रा ७८ ले संघीय सं´सदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्का´ल का´यम रहेको प्रतिनिधि सभाको नि´र्वाचनमा प´राजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्र´तिनिधि स´भाको कार्यकालमा उपधारा १ ब´मोजिम मन्त्री पदमा नि´युक्तिका लागि यो´ग्य हुने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।